Marcelo Oo Qarka U Saaran Inuu Sii Joogo Real Madrid Xilli Ciyaareed Kale
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMarcelo oo qarka u saaran inuu sii joogo Real Madrid xilli ciyaareed kale
Marcelo ayaa lagu soo waramayaa inuu sii joogi doono Real Madrid ugu yaraan xilli ciyaareed kale ka dib markii uu wadahadalo la yeeshay kooxda reer Spain.
Daafaca reer Brazil ayaa ku dhibtooday inuu boos ka helo kooxda xilli ciyaareedkii hore, waxaana lala xiriirinayay inuu ka tagayo.
Si kastaba ha ahaatee, Marca ayaa soo jeedineysa in 33 jirkaan uu weli ixtiraam weyn u hayo Madrid isla markaana ay si aad ah u xiiseynayeen inay ku qanciyaan daafaca mudada dheer u ciyaarayay inuu sii joogo.
Ka dib markii uu balanqaad ka helay tababaraha cusub Carlo Ancelotti , kaasoo uu hore uga soo hoos ciyaaray labo xilli ciyaareed, waxaa la sheegayaa in Marcelo uu haatan arki doono sanadka ugu dambeeya ee qandaraaskiisa.
xidigaa ay isku kooxda yihiin ee Sergio Ramos ayaa sidoo kale la aaminsan yahay in uu qarka u saaran yahay in uu xilli ciyaareed kale saxiixo.